Ubumfihlo / Imigomo Yokusebenzisa |
Ikhaya » Ubumfihlo / Imigomo Yokusebenzisa
I imigomo nemibandela elandelayo eziqondisa zonke ukusetshenziswa website coronationcasino.com futhi konke okuqukethwe, amasevisi kanye nemikhiqizo kuyatholakala at noma nge website (kuthathwe ndawonye, Iwebhusayithi). Iwebhusayithi is owned futhi eziqhutshwa wokugcotshwa Casino - GlobaliGaming (& Quot; ekumisweni Casino & quot;). Iwebhusayithi esinikezwa ngokweyame ukwamukela kwakho ngaphandle ukuguqulwa yonke imigomo nemibandela equkethwe lapha zonke ezinye imithetho yokusebenza, izinqubomgomo (okubala, ngaphandle komkhawulo, Inqubomgomo yemfihlo wokugcotshwa Casino sika) kanye nenqubo ingavezwa ngezikhathi ezithile kule Site by wokugcotshwa Casino (bebonke, the & quot; Isivumelwano & quot;).
Sicela ufunde lesi sivumelwano ngokucophelela ngaphambi kokufinyelela noma usebenzisa Iwebhusayithi. By ukufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye web site, uyavumelana ukuba babe eboshiwe imigomo nemibandela yalesi sivumelwano. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, khona-ke kungenzeka ukufinyelela iwebhusayithi noma usebenzise noma yimaphi amasevisi. Uma le migomo nemibandela njengesenzo umnikelo wokugcotshwa Casino, Ukwamukela is ngokucacile kungagcini nalemibandela. Iwebhusayithi itholakala kuphela nabantu okungenani 18 iminyaka budzala.
Your Account coronationcasino.com futhi Site. Uma ibhulogi / site kwi Website, wena banesibopho nokugcina ukuphepha kwe-akhawunti yakho futhi blog, you are necala ngokuphelele yonke imisebenzi ukuthi zenzeka ngaphansi akhawunti kanye nezinye izenzo ezithathwe mayelana nalesi blog. Akumelwe achaza noma ukwabela angukhiye blog yakho ngendlela edukisayo noma ezingemthetho, kuhlanganise ngendlela okuhloswe zohwebo igama noma idumela abanye, futhi wokugcotshwa Casino ingase ishintshe noma asuse noma yisiphi incazelo noma eliyisihluthulelo ayibona okungalungile noma ezingemthetho, noma cishe ngenye yokubangela wokugcotshwa Casino yiphi inhlawulo. Wena kumele ngokushesha lazise wokugcotshwa Casino kwanoma iyiphi usetshenziswa olungagunyaziwe blog yakho, -akhawunti yakho noma yimuphi zokweqa zokuphepha. Wokugcotshwa Casino ngeke kube nesibopho sokukhokhela izenzo noma ukungenzi You, kubandakanya nanoma yimuphi umonakalo kwanoma yiluphi uhlobo kuzona ngenxa izenzo ezinjalo noma ukungenzi.
Umthwalo Wemfanelo Abanikeli. Uma usebenza ibhulogi, ukuphawula blog, ngeposi ezibonakalayo Iwebhusayithi, iposi links kwi Website, noma wenze (noma avumele noma iluphi third party ukwenza) impahla etholakalayo esebenzisa Iwebhusayithi (noma iyiphi impahla ezinjalo, & Quot; Okuqukethwe & quot;), Wena unesibopho ngokuqukethwe, futhi yimuphi umonakalo owabangelwa, ukuthi Okuqukethwe. Lokho kunjalo kungakhathaliseki Okuqukethwe umbuzo lwakha umbhalo, ihluzo, ifayela lokulalelwayo, noma isofthiwe computer. Ngokwenza Okuqukethwe kuyatholakala, wena amelela futhi unika amandla okuthi:
ukulandwa, ukukopa nokungezelela ukusebenzisa kokuqukethwe ngeke aphula amalungelo nokuphathelene, kubandakanya kodwa akugcini copyright, patent, lokuhweba noma ukuhweba amalungelo imfihlo, yomuntu wesithathu;
uma umqashi wakho unamalungelo empahla yobuhlakani ukuze nawe ukudala, une noma (i) imvume wathola kumqashi wakho ukuze uthumele noma enze Content, kubandakanya kodwa akupheleli kuloku isofthiwe, noma (ii) kuvikelwe kusuka kumqashi wakho waiver ngokuqondene wonke amalungelo noma Content;
usuwenze ngokugcwele nanoma yiziphi amalayisensi third-party eziphathelene Content, futhi ngenzé zonke izinto ezidingekayo ukuze kudlule ngokuphumelelayo ukuqeda abasebenzisi noma yimiphi imigomo edingekayo;
Content ayiqukethe noma ukufaka noma iyiphi amagciwane, izikelemu, malware, amahhashi iThrojani noma okunye okuqukethwe eyingozi noma zonakalise;
Content akulona ugaxekile, akuyona umshini- noma ngezikhathi-elakhiwe, futhi ayiqukethe commercial bangathembeki noma engadingeki eklanyelwe kumthamo amasayithi avela eceleni noma zokuthuthukisa rankings search injini amasayithi avela eceleni, noma ezinye izenzo ngalokungekho emtsetfweni (ezifana nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi) noma ukudukisa abamukeli njengoba umthombo indaba (ezifana ubuqili);
Content akuyona eziphathelene nobufebe nobunja, ayiqukethe izinsongo noma udlame maqondana ngabanye noma izinhlangano, futhi akwephuli ubumfihlo noma okuhlobene amalungelo yomuntu wesithathu;
ibhulogi yakho singavumi ikhangiswe nge imilayezo engadingekile electronic efana links ogaxekile ku Amaqembu ezindaba, izinhlu imeyili, ezinye blogs and sites web, nezindlela ezifanayo engacelwanga asetshenzisiwe;
ibhulogi yakho ngegama ngendlela ukuthi idukisa abafundi bakho acabange ukuthi wena omunye umuntu noma inkampani. Ngokwesibonelo, URL blog yakho noma igama akulona igama umuntu ngaphandle ngokwakho noma inkampani okungeyona eyakwa siqu sakho; futhi
unayo, in the case of Okuqukethwe kuhlanganisa ikhodi computer, bahlukaniswe ngokunembile futhi / noma wachaza uhlobo, nature, isebenzisa kanye nemiphumela yezinto, kungakhathaliseki uma ucelwa ukuba wenze kanjalo by wokugcotshwa Casino noma ngenye indlela.
Ngokuthumela Lokucuketfwe lokufanele wokugcotshwa Casino ukuze afakwe kuwebhusayithi yakho, wena pha wokugcotshwa Casino emhlabeni kabanzi, abasebukhosini-free, futhi ilayisense non-yokukhiqiza kabusha, guqula, nezimo futhi lishicilele Okuqukethwe kuphela ngenjongo yokubukisa, Ekusakazeni nasekuhumusheni kwakhe ukugqugquzela ibhulogi yakho. Uma ususa sokuqukethwe, Wokugcotshwa Casino uzosebenzisa amandla abonakalayo kokuyikhipha Iwebhusayithi, kodwa uyavuma ukuthi ukulondoloza isikhashana noma izinkomba Content kungenzeka kwenziwe ngokushesha akutholakali.
Ngaphandle nokukhawulela nganoma iyiphi yalezo njengommeleli noma amawaranti, Wokugcotshwa Casino umuntu unelungelo (Nokho hhayi isibopho) ukuze, ngokubona wokugcotshwa Casino kuphela (i) bayenqaba noma susa noma yikuphi okuqukethwe, umbono wokugcotshwa Casino esifanele, kwephula inqubomgomo wokugcotshwa Casino noma nganoma iyiphi indlela eyingozi noma engabazisayo, noma (ii) sokuqeda noma unqabe nokusetshenziswa Iwebhusayithi ukuba noma yimuphi umuntu noma inhlangano nganoma yisiphi isizathu, ngokubona wokugcotshwa Casino kuphela. Wokugcotshwa Casino ngeke ukuthi abanaso isibopho ukunikeza imali nanoma iyiphi imali ikhokhwe ngaphambilini.
Inkokhelo futhi Sokuvuselela.
Ngokukhetha umkhiqizo noma isevisi, Uyavuma ukukhokhela wokugcotshwa Casino ngesikhathi esisodwa kanye / noma ngenyanga noma ngonyaka imali yobulunga kukhonjisiwe (eyengeziwe imigomo lokukhokha kungase kufakwe okunye ukuxhumana). izinkokhelo zokubhaliselwe izobizwa a pre-pay ngesisekelo ngosuku ubhalisele i Nomanini ngisibekele ukusetshenziswa ukuthi inkonzo for ngenyanga noma ngonyaka ukuthenga period njengoba kukhonjisiwe. Izinkokhelo akuzona imali.
Ngaphandle kokuthi azise wokugcotshwa Casino ngaphambi kokuphela kwesimiso esebenzayo Ukuthenga period ukuthi ufuna ukubhalisa, ukubhalisa kwakho ukuvuselela ngokuzenzakalelayo futhi ugunyaza ukuba uqoqe ke-esebenzayo wonyaka noma nyangazonke subscription Imali yokubhalisa enjalo (kanye yiziphi izintela) usebenzisa noma iyiphi i-credit card noma enye indlela yokukhokha esinayo irekhodi ngawe. Intuthuko singacinywa nganoma yisiphi isikhathi ufaka isicelo sakho ukuze wokugcotshwa Casino ngokubhala.
Izimali; Inkokhelo. Ngokusayina i-Services akhawunti uvume ukukhokha wokugcotshwa Casino esebenzayo isethaphu Izimali kanye nezimali esiqhubekayo. Izimali zokufaka isicelo elizokhokhiswa kusukela osukwini amasevisi zakho amiswa futhi kusengaphambili kokusebenzisa lawo masevisi. Wokugcotshwa Casino uyaligodla ilungelo lokushintsha imigomo kanye nezimali zokukhokha phezu ezingamashumi amathathu (30) izinsuku ngaphambi isaziso esibhaliwe kuwe. Usizo singacinywa nguwe at kunini ezingamashumi amathathu (30) isaziso izinsuku esilotshiwe isinike wokugcotshwa Casino.
Amaprosesa asekelwe. Uma isevisi yakho kuhlanganisa ukufinyelela igunya ukwesekwa imeyili. & Quot; Ukwesekelwa nge-Email" kusho ikhono lokwenza izicelo for technical support usizo nge-imeyili noma ngasiphi isikhathi (nemizamo ezifanele yinoma wokugcotshwa Casino ukuba baphendule lungakapheli usuku olulodwa lwebhizinisi) ngokuphathelene nokusetshenziswa kwe-VIP Services. & Quot; Priority" kusho ukuthi ukusekelwa oza kuqala usekelo kubasebenzisi standard noma khulula coronationcasino.com amasevisi. Zonke ukwesekwa zizonikezwa ngokuhambisana wokugcotshwa Casino namasevisi standard imikhuba, izinqubo kanye nezinqubomgomo.
Umthwalo Wemfanelo Iwebhusayithi Izivakashi. Wokugcotshwa Casino ongakaze sibuyekezwe, futhi awukwazi ukubukeza, yonke impahla, kubandakanya computer, liposelwe Iwebhusayithi, futhi ngaleyo ndlela ngeke kube umthwalo wemfanelo wokuqukethwe ukuthi impahla sika, sebenzisa noma imiphumela. By oqhuba Iwebhusayithi, Wokugcotshwa Casino akusho ukumela noma ungasho amazwi agxeka ukuthi ihamba emazwini ezizofakwa khona, noma ukuthi ukholelwa izinto ezinjalo sinembe, ewusizo noma non-eyingozi. Wena unesibopho izinyathelo njengoba kudingekile ukuzivikela kanye nokuvikela computer yakho kusuka amagciwane, izikelemu, iThrojani amahhashi, kanye nokunye okuqukethwe eyingozi noma zonakalise. Iwebhusayithi ingaqukatha okuqukethwe ecasula, okuyihlazo, noma ngenye engabazisayo, kanye nokuqukethwe equkethe anganembile, amaphutha typographical, kanye nezinye amaphutha. Iwebhusayithi ingase futhi zinokwaziswa ephula amalungelo ubumfihlo noma okuhlobene, noma ephula yebuhlakani kanye namanye amalungelo nokuphathelene, besithathu, noma ukulandwa, ukukopisha noma ukusetshenziswa okuyinto kuncike eminye imigomo nemibandela, washo noma simbe. Wokugcotshwa Casino uyawachitha noma yimuphi umthwalo yimuphi umonakalo owabangelwa ukusetshenziswa yizivakashi Iwebhusayithi, noma kunoma iyiphi ukulandwa yilabo izivakashi kokuqukethwe khona posted.
Okuqukethwe Posted on Umphumela Amawebhusayithi. Asizange sibuyekezwe, futhi awukwazi ukubukeza, yonke impahla, kubandakanya computer, asenzele wona ngebandla website kanye namakhasi web okungazange coronationcasino.com links, nokuthi isixhumanisi ukuze coronationcasino.com. Wokugcotshwa Casino akanayo ukulawula phezu kwalabo kumawebhusayithi angewona awe-wokugcotshwa Casino and amakhasi ewebhu, futhi akuyena obangela okuqukethwe kwabo noma ukusetshenziswa kwazo. Ngokuxhumanisa kuwebhusayithi non-wokugcotshwa Casino noma ikhasi lewebhu, Wokugcotshwa Casino akusho ukumela noma ungasho amazwi agxeka ukuthi etuswa website enjalo noma ikhasi lewebhu. Wena unesibopho izinyathelo njengoba kudingekile ukuzivikela kanye nokuvikela computer yakho kusuka amagciwane, izikelemu, iThrojani amahhashi, kanye nokunye okuqukethwe eyingozi noma zonakalise. Wokugcotshwa Casino uyawachitha noma yimuphi umthwalo yimuphi umonakalo owabangelwa ukusebenzisa kwakho kokusetshenziswa non-wokugcotshwa Casino amawebhusayithi kanye amakhasi ewebhu.
Copyright futhi Yamadivayisi Inqubomgomo. Njengoba wokugcotshwa Casino acele labanye ukuhlonipha amalungelo empahla yobuhlakani, it ehlonipha Intellectual Property amalungelo abanye. Uma ukholwa ukuthi impahla esisogwini noma exhumene by coronationcasino.com yephula i-copyright yakho, uyakhuthazwa ukuba azise wokugcotshwa Casino ngokuhambisana Digital Millennium Copyright Act wokugcotshwa Casino sika (& Quot; DMCA & quot;) Policy. Wokugcotshwa Casino uyosabela zonke izaziso enjalo, kuhlanganise njengoba kudingwa noma ezifanele ngokususa impahla ephula umthetho noma ukuvimbela yonke link ephula umthetho. Wokugcotshwa Casino uyobuqeda ukufinyelela izivakashi futhi asebenzise Iwebhusayithi uma, ngaphansi kwezimo ezifanele, isivakashi kunqunywa ukuthi ungumhlukumezi impinda amalungelo okuloba noma ezinye amalungelo empahla wokugcotshwa Casino noma abanye. Endabeni ukuqedwa enjalo, Wokugcotshwa Casino ngeke ukuthi abanaso isibopho ukunikeza imali nanoma iyiphi imali ngaphambilini ikhokhwe ukuze wokugcotshwa Casino.
Okwenziwe ngenqondo. Lesi sivumelwano ukudlulisa kusuka ekumisweni Casino you phi Casino wokugcotshwa nobe umuntfu wesitsatfu impahla ebhaliwe yengqondo, futhi kulungile, isihloko nentshisakalo futhi mhlaba uzohlala (njengoba emkhatsini lamacele) efiphethe wokugcotshwa Casino. wokugcotshwa Casino, coronationcasino.com, the logo coronationcasino.com, kanye nazo zonke ezinye izimpawu zokuhweba, service amamaki, Ihluzo kanye logo asetshenziswa ezinhlelweni uxhumano nge coronationcasino.com, noma Iwebhusayithi yizimpawu zokuhweba noma yizimpawu zokuhweba ezibhalisiwe zakwa-wokugcotshwa Casino noma nabaniki layisense wokugcotshwa Casino sika. Okunye zokuthengisa, service amamaki, Ihluzo kanye logo asetshenziswa ezinhlelweni uxhumano ne Website kungaba izimpawu zokuthengisa zezinye besithathu. Ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi ukunika ilungelo noma ilayisensi nokuzala noma ngenye lokusebenzisa nanoma ikuphi ukuthuthukisa Casino wokugcotshwa noma izimpawu zokuhweba zamaqembu esithathu.
Izikhangiso. Wokugcotshwa Casino uyaligodla ilungelo ukubonisa izikhangiso blog yakho ngaphandle kokuthi uthenge i-akhawunti ad-free.
Isichasiso. Wokugcotshwa Casino uyaligodla ilungelo ukubonisa isichasiso links ezifana 'Blog at coronationcasino.com,'Indaba ephathwayo umbhali, futhi ifonti ukufanisa blog yakho unyaweni noma indawo yamathuluzi.
Imikhiqizo Partner. By isebenze umkhiqizo umlingani (isb. indaba ephathwayo) kusukela elinye lozakwethu, uyavumelana nemigomo ukuthi umlingani inkonzo. Ungakhetha ukuphuma ka imigomo yabo yenkonzo nganoma yisiphi isikhathi de-isebenze umkhiqizo umlingani.
Amagama Domain. Uma ubhalisa igama lesizinda, usebenzisa noma ngokudlulisela ngaphambilini bhalisiwe igama lesizinda, wena avume futhi uyavuma ukuthi ukusetshenziswa igama lesizinda ubuye kuncike imigomo Internet Corporation lokunikezela amagama nezinombolo (& Quot; ICANN & quot;), kuhlanganise Amalungelo Registration Nemithwalo Yemfanelo.
Izinguquko. Wokugcotshwa Casino uyaligodla ilungelo, ngokuzikhethela kwayo, ukushintsha noma okunye esikhundleni noma iyiphi ingxenye yalesi Sivumelwano. Kungumsebenzi wakho ukubheka lesi Sivumelwano ngesikhathi izinguquko. Ukusebenzisa kwakho ngokuqhubeka noma ukufinyelela Iwebhusayithi elandelayo zokuthunyelwa yimuphi izinguquko kulesi sivumelwano kuhlanganisa ukwamukela of lezo zinguquko. Wokugcotshwa Casino zingasiza, esikhathini esizayo, ngamasevisi kanye / noma izici ezintsha ngokusebenzisa Iwebhusayithi (okubala, ukukhululwa amathuluzi amasha kanye nemithombo). izici ezinjalo ezintsha kanye / noma amasevisi uyakuba ngaphansi kwemigomo nemibandela yalesi Sivumelwano.
Ukuqedwa. Wokugcotshwa Casino avale ukufinyelela wakho kuzo zonke noma kunoma iyiphi ingxenye ye-website noma ngasiphi isikhathi, nge noma ngaphandle kwesizathu, noma ngaphandle kwesaziso, ngempumelelo ngokushesha. Uma ufisa sokuqeda lesi Sivumelwano noma i-akhawunti yakho ye-coronationcasino.com (uma unayo), ungase umane phela usebenzisa i-Iwebhusayithi. Naphezu kwalokho amaphuzu osekuxoxwe ngawo, uma une wakhokha akhawunti services, I-akhawunti esinjalo singamane Ingayekiswa wokugcotshwa Casino uma ngokwezinto ezibonakalayo kuphulwa lesi Sivumelwano ahluleke belaphe kwephula ngaphakathi ezingamashumi amathathu (30) kusukela isaziso wokugcotshwa Casino kini yalo; kuncike ekutheni, Wokugcotshwa Casino kungaba sokuqeda Iwebhusayithi ngokushesha njengengxenye ejwayelekile ukuvala shaqa yenkonzo yethu. Konke nezinhlinzeko zalesi Sivumelwano ngemvelo yabo kufanele kubekezelele ukunqanyulwa kuyakuba asinde ekunqanyulweni kwe, okubala, ngaphandle komkhawulo, ubunikazi amalungiselelo, iwaranti Emthwalweni, lokumiswa kanye nokulinganiselwa nezibopho.
Disclaimer of zemvume. Iwebhusayithi unikezwa & quot; njengoba kuyinto & quot;. Wokugcotshwa Casino nabaphakeli bakhe bamaqembu bakhe bamalayisensi ngalokhu emthwalweni zonke iziqiniseko kwanoma yiluphi uhlobo, ukuveza noma somlomo, okubala, ngaphandle komkhawulo, the amawaranti okuthengisa, ukuqina ngenjongo letsite bese non-sokwephulwa kwe. Ngiphakathi wokugcotshwa Casino noma abahlinzeki bawo nabanikezeli bamalayisensi, kwenza noma iyiphi iwaranti Iwebhusayithi kuyoba iphutha mahhala noma ukuthi ukufinyelela naso kuyoba okuqhubekayo noma ungaphazanyiswa. Uyaqonda ukuthi ulanda kusuka, noma ngenye indlela ukuthola okuqukethwe noma amasevisi ngokusebenzisa, Iwebhusayithi at ngokubona kwakho siqu kanye nobungozi.
Umkhawulo of Ugibe. Ngokuphazima umcimbi wokugcotshwa kuthanda Casino, noma abahlinzeki bawo noma bakhe bamalayisensi, uyakuba necala maqondana nanoma yiluphi udaba subject kwalesi sivumelwano ngaphansi kwanoma yisiphi inkontileka, ukunganaki, icala elibukhali noma omunye theory zomthetho noma equitable for: (i) noma yikuphi ekhethekile, komonakalo wengozi noma wamabomu; (ii) izindleko kwempahla for imikhiqizo lifake endaweni noma amasevisi; (iii) ngoba ukuphazanyiswa ukusetshenziswa noma ukulahleka noma ukonakala kwanoma idatha; noma (iv) nanoma iyiphi imali ukuthi idlule ebhadelwa nguwe wokugcotshwa Casino ngaphansi kwalesi sivumelwano ngesikhathi eziyishumi nambili (12) inyanga period ngaphambi imbangela isinyathelo. Wokugcotshwa Casino Ungabi icala nganoma isiphi ukwehluleka noma ukubambezeleka ngenxa izindaba ezingaphezu kwamandla abo kunengqondo. Ukuyekwa kuyokwenzeka angeke zisebenze kuze kube sezingeni kunqatshelwe umthetho osebenzayo.
Imibono General neziqinisekiso. Wena amelela futhi unika amandla okuthi (i) ukusebenzisa kwakho kokusetshenziswa Iwebhusayithi kuyoba ngokuhambisana ngokuqinile wokugcotshwa Casino Inqubomgomo yemfihlo, nalesi Sivumelwano kanye nayo yonke imithetho nemigomo esebenzayo (kubandakanya ngaphandle komkhawulo iyiphi imithetho yangakini noma izimiselo ezweni lakini, isimo, idolobha, noma kwenye indawo ngaphansi kukahulumeni, mayelana nokuziphatha inthanethi kanye nokuqukethwe okwamukelekayo, futhi kubandakanya yonke imithetho esebenzayo ephathelene yokudlulisela idatha technical athunyelwa kwamanye amazwe evela e-United States noma ezweni abahlala kulo okwakungaba wena hlala) futhi (ii) ukusebenzisa kwakho kokusetshenziswa Iwebhusayithi ngeke aphula noma misappropriate amalungelo empahla yomuntu wesithathu.
ivikelwe. Wena uyavuma ukuvikela bese ugcine wokugcotshwa Casino, osonkontileka yayo, futhi abantu bakhe bamalayisense, nabaqondisi bazo ngokulandelana kwabo, izikhulu, abasebenzi kanye namanxusa kunoma nazo zonke izicelo kanye nezindleko, kufaka phakathi izindleko zabameli, ezivele ngenxa ukusetshenziswa yakho Iwebhusayithi, kubandakanya kodwa hhayi kungagcini ukwephulwa kwakho kwalesi sivumelwano.
Okuxubile. Lesi sivumelwano akha sonke isivumelwano esiphelele phakathi wokugcotshwa Casino nawe udaba subject yalapha, futhi bangase kuphela ukuguqulwa nokuchitshiyelwa elibhaliwe lasayinwa by an executive ogunyaziwe wokugcotshwa Casino, noma nge ukuthunyelwa nge wokugcotshwa Casino a olubukeziwe. Ngaphandle kuze kube sezingeni umthetho osebenzayo, uma ikhona, usho okunye okwehlukile, lokhu Sivumelwano, yimuphi ukufinyelela noma ukusetshenziswa Iwebhusayithi uyobuswa kwemithetho eNgilandi naseWales, ngaphandle kokuphambana kokunikelwa komthetho, futhi yokudlalela efanele nanoma yiziphi izingxabano ku engenxa noma ehlobene nanoma okufanayo kuyoba isimo nezinkantolo federal elise London, UK. Ngaphandle izicelo impumuzo injunctive noma equitable noma izicelo mayelana namalungelo empahla yobuhlakani (okungase kwenziwe kunoma iyiphi yinkantolo ngaphandle ukuthunyelwa kwebhondi), iyiphi ingxabano ezivukayo ngaphansi kwalesi Sivumelwano siyakuhlwithwa ekugcineni zijwayeza ngokuhambisana noHlelo Oluphelele Arbitration Imithetho Judicial Arbitration futhi Mediation Service, Inc. (& Quot; sezimoto & quot;) by balamule ezintathu abamisiwe ngokuhambisana nemithetho anjalo. I ukulamula iyokwenziwa in London UK, ngolimi lwesiNgisi kanye nesinqumo arbitral kungenzeka iphoqelelwe iziphequluli kunoma yiphi inkantolo. Iqembu linqoba kunoma yisiphi isinyathelo noma uqhubeke ukuze uhloniphe lesi Sivumelwano uzakuba nelungelo izindleko kanye nezimali zokukhokhela abameli. Uma noma iyiphi ingxenye yalesi sivumelwano labetibambile ezingavumelekile noma esingaphoqeleleki, ukuthi okuyingxenye ngeke kuthathwe ukubonakalisa ngenhloso yokuba zokuqala amaqembu ', izingxenye ezisele ngeke sihlale nagokungenamkhawulo. A kuchithwa by noma party wanoma yimuphi term noma isimo kwalesi Sivumelwano noma ufa yalo, kunoma iyiphi esenzakalweni esisodwa, Ngeke udlulisa migomo noma isimo noma ufa ezalandela yalo. Ungase nika amalungelo akho ngaphansi kwalesi Sivumelwano kwenye iphathi ukuthi ivuma, futhi uyavuma ukuthi sizibophezele, imigomo yayo nemibandela; Wokugcotshwa Casino anganikela amalungelo ayo ngaphansi kwalesi sivumelwano ngaphandle kombandela. Lesi sivumelwano kufanele ziphezu futhi ngeke inure ukuba kuzuze amaqembu, abazolandela yabo futhi inikeza kuvunyelwe.
wokugcotshwa Casino - GlobaliGaming ("wokugcotshwa Casino& Quot;) isebenza coronationcasino.com kanye ongaqhuba kwamanye amawebhusayithi. Kungumgomo wokugcotshwa Casino sokuhlonipha ubumfihlo bakho mayelana nanobe ngabe nguwuphi umniningwano singase siqoqe ngenkathi eqhuba website yethu.
Like iningi opharetha website, Wokugcotshwa Casino iqoqa non-uqobo ukwaziswa we uhlobo iziphequluli web kanye amaseva ngokuvamile wenze itholakale, ezifana uhlobo lwesiphequluli, ulimi oluncamelayo, isayithi ebhekisela, futhi usuku kanye nesikhathi sesicelo ngasinye isivakashi. Injongo wokugcotshwa Casino sika ekuqoqeni ulwazi non-ubuwena kungukuqonda kangcono indlela izivakashi wokugcotshwa Casino sebenzisa website yayo. Ngezikhathi ezithile, Wokugcotshwa Casino kungase ukukhulula non-uqobo ukwaziswa in the aggregate, isib, nokushicilela kombiko izitayela ukusetshenziswa website yayo.
Wokugcotshwa Casino futhi iqoqa ulwazi okunamandla uqobo olubonakalisa like Uhlelo Olulawula Ukunikezelana (IP) lamakheli ungene ngemvume abasebenzisi kanye kubasebenzisi bashiye amazwana blogs coronationcasino.com / sites. Wokugcotshwa Casino kuphela adalule ngemvume umsebenzisi futhi mazwi IP amakheli ngaphansi kwezimo ezifanayo nokuthi isebenzisa udalula ulwazi lomuntu siqu olubonakalisa njengoba kuchaziwe ngezansi, ngaphandle kokuthi amakheli mazwi IP namakheli e-imeyli ezibonakala embulelwe abaqondisi blog / site lapho amazwana wasala.
Iqoqa of Information Ngabanye Ukuthola
izivakashi Eqiniseka kumawebhusayithi wokugcotshwa Casino zikhetha ukuba basebenzisane wokugcotshwa Casino ngezindlela ledzinga kutsi wokugcotshwa Casino ukuze abuthele uqobo ukwaziswa. Inani kanye nohlobo ulwazi lokuthi wokugcotshwa Casino ebutha incike emvelweni nokuxhumana. Ngokwesibonelo, esiyicelayo izivakashi ubhalisele at coronationcasino.com ukuhlinzeka igama lomsebenzisi ikheli le-imeyili. Labo abahlanganyela ukuthengiselana nge wokugcotshwa Casino ucelwa ukuba unikeze imininingwane eyengeziwe, kuhlanganise njengoba kudingekile ulwazi lomuntu siqu kanye zezimali okudingekayo ukuze kusetshenzwe labo zokukhokhelwa. Esimweni ngasinye, Wokugcotshwa Casino iqoqa ukwaziswa okunjalo maqondana kuphela njengoba kunesidingo noma kufanele ukuba agcwalise injongo nokuxhumana yesivakashi nge wokugcotshwa Casino. Wokugcotshwa Casino alisho uqobo ukwaziswa omunye ngaphandle njengoba kuchaziwe ngezansi. Futhi izivakashi njalo bayenqaba ukuphakela uqobo ukwaziswa, ne-caveat ukuthi kungase nqanda them nga ukuhlanganyela emisebenzini ethile ezihlobene website-.
Wokugcotshwa Casino siqoqe izibalo ukuziphatha nezivakashi kumawebhusayithi zayo. Wokugcotshwa Casino Ungaveza lolu lwazi esidlangalaleni noma ukunikeza kwabanye. Nokho, Wokugcotshwa Casino alisho uqobo ukwaziswa omunye ngaphandle njengoba kuchaziwe ngezansi.
Protection of ethile yolwazi Ngabanye Ukuthola
Wokugcotshwa Casino Lembula okunamandla mathupha-ekuboneni kanye uqobo ukwaziswa kuphela kulabo abasebenzi bayo, osonkontileka nezinhlangano esebenzisana nayo ukuthi (i) kudingeka ukwazi leyo mininingwane ukuze ukuyicubungula egameni wokugcotshwa Casino noma ukunikeza izinsizakalo kuyatholakala at website wokugcotshwa Casino sika, futhi (ii) ukuthi bavumile hhayi ukudalula lolu daba kwabanye. Abanye balabo abasebenzi, osonkontileka nezinhlangano esebenzisana kungenzeka akhiwe ngaphandle kwezwe ekhaya; ngokusebenzisa amawebhusayithi wokugcotshwa Casino sika, uyakuvuma ukudluliselwa kolwazi ezinjalo. Wokugcotshwa Casino ngeke ukuqasha noma ukuthengisa okunamandla mathupha-ekuboneni kanye uqobo ukwaziswa kunoma ubani. Ngaphandle kubasebenzi bayo, osonkontileka nezinhlangano esebenzisana nayo, njengoba kuchazwe ngenhla, Wokugcotshwa Casino Lembula okunamandla mathupha-ekuboneni kanye uqobo ukwaziswa kuphela eziphendula amasamanisi, wenkantolo noma ezinye izicelo zokuphatha, noma lapho ibekwa esihlalweni Casino okholwa okuhle ukuthi ukuvezwa ezidingekayo ukuze bavikele impahla noma amalungelo wokugcotshwa Casino, besithathu noma umphakathi wonkana. Uma ungumsebenzisi obhalisile we-website wokugcotshwa Casino futhi baye ekunike ikheli lakho le-imeyili, Wokugcotshwa Casino ngezikhathi ezithile thumela i-imeyili ku ngikuxoxele izici ezintsha, azicelele impendulo yakho, noma nje uhlale kuze kube yimanje kwenzakalani nge wokugcotshwa Casino kanye nemikhiqizo yethu. Uma usithumelele isicelo (Ngokwesibonelo nge-imeyili noma nge omunye impendulo yethu tindlela), sinelungelo kushicilelwe ukuze asisize acacise noma aphendule isicelo sakho noma ukuze asisize ukusekela kwamanye abasebenzisi. Wokugcotshwa Casino ithatha wonke izinyathelo kuyadingeka ukuvikela ngokumelene ukufinyelela okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, ukulungiswa noma ukubhujiswa okungase mathupha-ekuboneni kanye uqobo ukwaziswa.
Ikhukhi string kolwazi ukuthi website izitolo kwikhompyutha izivakashi, nokuthi isiphequluli yesivakashi anikezwa website isikhathi ngasinye isivakashi entela. Wokugcotshwa Casino isebenzisa amakhukhi ukusiza wokugcotshwa Casino bona abuye ukulandelela izivakashi, ukusetshenziswa kwabo wokugcotshwa Casino website, futhi website yabo ukufinyelela izintandokazi. Wokugcotshwa Casino izivakashi abangezanga ufisa ukuba amakhukhi ibekwe kumakhompyutha abo kufanele asihlele iziphequluli zabo ukuze wenqabela amakhukhi ngaphambi kokusebenzisa amawebhusayithi wokugcotshwa Casino sika, ne ethile ukuthi izici ezithile amawebhusayithi wokugcotshwa Casino BakaJehova kungenzeka zingasebenzi kahle ngaphandle kosizo cookies.
Uma ibekwa esihlalweni Casino, noma kakhulu yonke izimpahla zalo, lalifundwa, noma uma kwenzeka akunakwenzeka ukuthi wokugcotshwa Casino uyaphuma ibhizinisi noma engena ezikweletini, Ulwazi lomsebenzisi kuyoba ngelilodwa phakathi kwempahla ukuthi idluliswe noma bathenga izakhiwo ngumuntu wesithathu. Uyavuma ukuthi ukudluliselwa nini, nokuthi iyiphi acquirer of wokugcotshwa Casino ungaqhubeka ukusebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu njengoba ezibekwe kule nqubomgomo.
Izikhangiso kokuvela kunoma iyiphi amaweb bakhululwe kubasebenzisi esikhangisa nabo, ngubani okungenzeka amakhukhi. Lawo makhukhi avumela i-server isikhangiso siqaphele ikhompyutha yakho isikhathi ngasinye lapho ukukuthumela isikhangiso inthanethi ukuhlanganisa imininingwane ngawe noma abanye abasebenzisa ikhompyutha yakho. Lolu lwazi kuvumela amanethiwekhi isikhangiso, phakathi kwezinye izinto, ukuletha izikhangiso ezihlosiwe ukuthi bakholelwa kuyoba of interest kakhulu kuwe. Komgomo Wobumfihlo ngale ihlanganisa ukusetshenziswa cookies by wokugcotshwa Casino and awubhekene ukusetshenziswa cookies noma yikuphi abakhangisi.
Inqubomgomo yemfihlo Izinguquko
Nakuba izinguquko kakhulu kungenzeka ezincane, Wokugcotshwa Casino kungase kushintshe Inqubomgomo yemfihlo yayo ngezikhathi ezithile, futhi ngokubona wokugcotshwa Casino kuphela. Wokugcotshwa Casino ikhuthaza izivakashi njalo ukuhlola leli khasi nganoma yisiphi izinguquko ukuze Inqubomgomo yemfihlo yayo. Uma une-akhawunti coronationcasino.com, Ungase wamukele isaziso ekwazisa lezi zinguquko. Ukusebenzisa kwakho ngokuqhubeka kule sayithi ngemuva kwanoma yiluphi ushintsho ekubeni Komgomo Wobumfihlo ngale Uyobenza ukwamukela kwakho kwalolo shintsho.
Wokugcotshwa Casino is hhayi nanoma iyiphi isethi ethile yasebukhosini. Have fun at wokugcotshwa Casino!
randy.hallcasino @ sinesimo sengqondo dot com
I Blackjack Hambayo Casino | Khipha ku-internet Imidlalo Top Slot Site |…